IEC expresses grief over 'lack of respect for democracy' | IOL News
Politics / 8 May 2019, 9:53pm / Jonisayi Maromo
The IEC's deputy chief executive Masego Shiburi updating journalists at the national results operation centre in Pretoria on the state of voting in South Africa's sixth national and provincial elections. Picture: Oupa Mokoena/ANA
Pretoria - The Electoral Commission of South Africa (IEC) on Wednesday warned that people attempting to vote twice would face serious consequences including charges of fraud.
"If there are people who are attempting to double vote, then it's a fraudulent activity. It's one which the Commission will not countenance. If there is evidence of anyone attempting, or having factually voted twice we would want details of those people so that we institute prosecutions against them," said Mamabolo.
At the same briefing, IEC's deputy chief executive Masego Shiburi revealed that by 5pm on Wednesday, five voting stations had not been opened to enable South Africans to cast their votes.
South Africans are electing lawmakers in a process that will ultimately see the selection of the country's next president by the new Parliament.
The May 8 elections are South Africa's sixth since the dawn of democracy in 1994.
Smooth sailing for voters in Merebank